FIAINANA: 2020-09-01 HITS: 24
Smart gantry crane with 7 millisecond delay, unmanned 5G trucks, tally system that automatically identifies damaged cabinets...a item of "black technology" promotes the continuous advancement of the "5G + smart port" construction of Ningbo Port, ary misy fiantraikany eo amin'ny indostria ny fanatsarana hatrany. Ningbo Joiwo dia manam-pahaizana manokana amin'ny telefaona indostrialy toa telefaona tsy misy toetr'andro, telefaona vonjy maika, intercom sns. Isan-taona dia hanondrana kaontenera maro amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo Ningbo ho an'ny mpanjifantsika izahay' Izahay dia nahita ny fampandrosoana tsy tapaka ny seranan'i Ningbo, ary ny fandrosoan'ny teknolojia dia mahatonga ny fandefasana entana ho mora kokoa.
Omaly, China Mobile Communications Group Co., Ltd. dia nanao Konferansa fiaraha-miasa 5G Smart Port sy ny fandefasana entana any Ningbo hampiroborobo ny traikefa sy fanao amin'ny fampandrosoana sy fomban'ny seranan-tsambon'i Ningbo Zhoushan ho an'ireo singa seranan-tsambo any amin'ny faritany 20, tanàna ary faritra mizaka tena mihoatra ny XNUMX. Shanghai, Guangdong, ary Tianjin.
Ilay tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny China Mobile dia nilaza ihany koa fa tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny andiam-pikarohana sy fanavaozana notontosain'ny Seranan'i Ningbo Zhoushan dia tsy vitan'ny hoe nanome traikefa sarobidy ho an'ny fampandrosoana ny seranan-tsambo manerantany, fa nanome torolàlana ho an'ny indostria mitsangana hafa koa amin'ny ny fomba "fananganana sy fampiasana tsara 5G".
Raha te hahalala bebe kokoa momba anay dia tsidiho azafady: https://www.joiwo.com